Politikan’ny tia-kely -
04/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Nahazo 2,33% izy tamin’ny 2013 ary tsy nahazo afa-tsy 1,16% tamin’ity taona ity. Raha ara-poto-kevitra na fitoviam-pijery no fanohanana kandida iray ho an’ny ankamaroan’ireo mpanohana, dia politikan’ny tia kely kosa no nataon’ny kandida Randriamampionono Joseph Martin na i Dadafara. Politikan’ny tia kely satria toa fikatsahana tombotsoa manokana ny tambin’ny fanohanana kandida iray ho azy. Nahagaga ny rehetra mantsy fa tonga nihaona tamin’ny kandida Ravalomanana teny amin’ny foibe toeran’ny Tim ity kandida ity, ary nisy ny resaka nifanaovan’ny roa tonta. Ho an’ny mpanara-baovao politika, rehefa tsy resaka fanohanana no nahatongavan’ity minisitry ny fiompiana tamin’ny andron’ny filoha Rajaonarimampianina ity dia mazava fa nisy ady varotra tao. Fomba fijery izay mitombina satria rehefa navoakan’ny tambazotra samihafa fa manohana ny Kandida Ravalomanana i Dadafara, dia nasehon’ity mpamorona ny Réfondation Totale de Madagascar ity ny tsy fahamatorany ara-politika fa dia nivadika nanohana ny 13 indray izy. Ny fijerin’ny mpanara-baovao, na dia fotoana fohy aza no nihaonan’ny roa tonta, dia nisy ady varotra politika tao. Politikan’ny seza no hita taratra amin’ity mpanao politika ity ka tsy ny hevitra na ny fandaharan’asan’ireo kandida miatirka ny fihodinana faharoa no hanohanany azy ireo fa ny tombotsoany manokana.
Raha noheverina fa hitondra fomba fijery matotra eo amin’ny fanaovana politika i Dadafara raha ny foto-kevitra nijoroany hatramin’iza, dia nampiseho indray izy ankehitriny fa mbola tsy matotra ara-politika. Na ireo mpifidy 57 903 nametraka fitokisana taminy aza mety ahatsiaro ho diso fanantenana amin’izao fomba entin’i Dadafara manao politika izao.
Politikan’ny seza, politikan’ny ady varotra, politikan’ny tia kely no azo andikana ny fihetsik’i Dadafara omaly, satria nilaza fa nihaona tamin’ny kandida roa tonta izy. Fa inona moa zany no tena anton’ilay fihaonana ??? Matoa tsy naharitra afa-tsy roa minitra ny fihaonany tamin’ny kandida Ravalomanana dia midika avy hatrany fa nisy ny tsy fitoviam-pijery eo amin’ny resaka fampandrosoam-pirenena na tsy nankatoa avy hatrany ny fangatahana na ny fepetra takian’i Dadafara ho takalon’ny fanohanana azy ny kandida Ravalomanana.